တရုတ်နိုင်ငံ၏ မဟာအားသစ်လောင်းခြင်းဆီသို့ ချီတက်ခြင်း၏ နောက်ကွယ်မှ “ဂုဏ်ပြုခြင်းမခံရသော သူရဲကောင်းများ” အား သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်က ချီးကျူး - Xinhua News Agency
၂၀၂၂ ခုနှစ် နှစ်သစ်မိန့်ခွန်းပြောကြားနေသော တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်အား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်က တရုတ်နိုင်ငံ၏ မဟာအားသစ်လောင်းခြင်းဆီသို့ ရှေ့ဆက်ချီတက်ခြင်း၏ နောက်ကွယ်၌ အထင်ကရဖြစ်ရပ်များစွာနှင့် မရေမတွက်နိုင်သည့် “ဂုဏ်ပြုခြင်းမခံရသော သူရဲကောင်းများ” ကို အသိအမှတ်ပြုလျက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်သည် “ထူးခြားအရေးပါသောနှစ်” အဖြစ် ရှုမြင်ကြောင်း နွေးထွေးသော နှစ်သစ်မိန့်ခွန်းတစ်ရပ်အား ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်က ပြောကြားခဲ့သည်။
နိုင်ငံတစ်ဝန်း ရုပ်မြင်သံကြားမှ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြောကြားခဲ့သော ၂၀၂၂ ခုနှစ် မိန့်ခွန်း၌ သမ္မတ ရှီက ဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ရေးအလုပ်သမားများ၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ၎င်းတို့၏နေအိမ်များ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရာမှ ပေါ်ထွက်လာသူများနှင့် တိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်ပေးသော စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။
ဂုဏ်ပြုခြင်းမခံရသော သူရဲကောင်းများ၏ အလုပ်ကို အပတ်တကုတ်ကြိုးစားခြင်းနှင့် စိတ်နှစ်မြှုပ်ထားခြင်းများကို “ခေတ်သစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရှေ့ဆက်ချီတက်ရေး ကြီးမားသော အရှိန်အဟုန်၌ ဖြည့်တင်းထားကြောင်း” ရှီက ပေကျင်းမြို့လယ်ရှိ ၎င်း၏ရုံးခန်း၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတသည် ၎င်းပြောထားသည့်အတိုင်း စိတ်နှလုံးနှစ်မြှုပ်လျက် ကောင်းမွန်လုပ်ဆောင်သူများအား ထိန်းသိမ်းထားသူ မြောက်များစွာကိုလည်း ဂုဏ်ယူအလေးပြုခဲ့သည်။ အာကာသတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသော တရုတ် အာကာသယာဉ်မှူးသုံးဦးနှင့် ပြည်ပ၌ သံတမန်မစ်ရှင်များနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်သူများအပြင် ပြည်ပရောက် ရဲဝံ့စွာပညာသင်ယူနေကြသော တရုတ်ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများကိုလည်း ရှီက ရည်ညွှန်းပြောကြားခဲ့သည်။
သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်သည် လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အတွင်း အထင်ကရဖြစ်ရပ်များကိုလည်း ၎င်း၏မိန့်ခွန်း၌ ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် အလွှာပေါင်းစုံ၌ အတော်အသင့်ပြည့်စုံကြွယ်ဝသော လူ့အဖွဲ့အစည်း တည်ဆောက်ရေးဖြစ်သော ၎င်း၏ပထမဆုံး ရာစုနှစ်ပန်းတိုင်အား နားလည်သဘောပေါက်လျက်ရှိသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျော့ကျရေးအား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသမိုင်းမှတ်တိုင်ကို ကြိုးပမ်းရာတွင် “အခြေခံတာဝန်” အဖြစ် ထည့်သွင်းစဉ်းထားကြောင်း သိရသည်။
ယင်းအချက်ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် အစောပိုင်းက ကြေညာခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံက ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု တိုက်ဖျက်ရေးတွင် “ပြီးပြည့်စုံသောအောင်ပွဲ” ကို ရရှိခဲ့သလို လွန်ခဲ့သည့် ၈ နှစ်အတွင်း လက်ရှိ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလိုင်းအောက်တွင် နေထိုင်သည့် ကျေးလက်ဒေသခံများအားလုံးကို ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမှ လွတ်မြောက်အောင် ဆွဲတင်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။
အလွှာပေါင်းစုံတွင် အတော်အသင့် ကြွယ်ဝပြည့်စုံသော လူ့အဖွဲ့အစည်းပေါ်လာခြင်းနှင့် အလွန်အမင်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ပပျောက်ရေးသည် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ (CPC) က ပြည်သူများအား ပေးအပ်လိုသောအရာဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာကြီးသို့လည်း ထောက်ပံ့ကူညီမှုလည်း ဖြစ်ကြောင်း ရှီက ဆိုသည်။
“ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ကျေးလက်ဒေသမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတုန်းက ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကို ကောင်းကောင်းကြီး သိရှိခံစားခဲ့ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောခဲ့ပြီး ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမှာ နေထိုင်ခဲ့သူများက မျိုးဆက် တစ်ဆက်မှတစ်ဆက်တိုင်အောင် တရုတ်ပြည်သူများ၏ စဉ်ဆက်မပြတ် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကြောင့် အစားအသောက် သို့မဟုတ် အဝတ်အစား၊ ပညာရေး၊ နေအိမ်နဲ့ ကျန်းမာရေးအာမခံမှုအတွက် စိတ်ပူစရာမရှိတော့ကြောင်း ဖြည့်စွက်ပြောခဲ့သည်။
“ပြည်သူတွေရဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေက ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဂရုစိုက်လေ့ရှိတဲ့အရာပါပဲ။ ပြီးတော့ ပြည်သူတွေရဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းကလည်း ကျွန်တော် အမြဲတမ်း အပတ်တကုတ် ကြိုးစားလေ့ရှိတဲ့အရာပါပဲ” ဟု ရှီက ပြောခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဟူနန်ပြည်နယ် Shibadong ကျေးရွာ ပါတီအကြီးအကဲ Shi Jintong က ကျေးရွာအတွင်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လုံးဝဥဿုံပပျောက်ခြင်းက ဒေသခံပြည်သူများ၏ ပျော်ရွှင်သောဘဝကို လိုက်လျှောက်ရာတွင် ရှေ့တစ်လှမ်းတိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ကျေးရွာသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်က ၎င်း၏ ခရီးစဉ်အတွင်း “ရည်မှန်းချက်ထားသော ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေး” စိတ်ကူးအကြံဉာဏ်ကို ရှီက ပထမဆုံးအဆိုပြုခဲ့သည့်နေရာဖြစ်သည်။
သမ္မတ၏ နှစ်သစ်ကူးမိန့်ခွန်းမှ ခွန်အားယူလျက် ပြည်သူများ၏ ချမ်းသာသုခတိုးတက်မှုရှိစေရန် ပို၍ ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း Shi က ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်ရေး၌ ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုလျက်ရှိသည်။
တစ်ချိန်က ဗိုင်းရပ်စ်သက်ရောက်မှုပြင်းထန်ခဲ့သော ဝူဟန့်မြို့ရှိ ဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်သော Wang Xun က ၎င်းအနေဖြင့် ကူးစက်ရောဂါမှ ပေါ်ထွက်လာသော အနာဂတ်နှင့်ပတ်သက်၍ ပိုမိုအကောင်းမြင်ထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
“ကျွန်မတို့ တရုတ်လူမျိုးတွေကို ဘယ်အရာမှ မရိုက်ခတ်နိုင်ပါဘူး။ ပါတီရဲ့ ဦးဆောင်မှုကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် လိုက်နာပြီး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် တားဆီးရေးဆောင်ရွက်ချက်များကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် ကျွန်မတို့ဟာ အတားအဆီးတွေအားလုံးကို သေချာပေါက်ကျော်လွှားနိုင်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်က ဇူလိုင် ၁ ရက်တွင် ကျင်းပခဲ့သော CPC ၏ ရာစုနှစ်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို မီးမောင်းထိုးပြခဲ့ပြီး သမိုင်းဝင်ကိစ္စရပ်များအပေါ် ပါတီ၏ တတိယမြောက်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို နိုဝင်ဘာလက ၁၉ ကြိမ်မြောက် CPC ဗဟိုကော်မတီ၏ ခြောက်ကြိမ်မြောက် မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေး၌ ပြဌာန်းခဲ့ကြောင်း မိန့်ခွန်း၌ ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် မဟာသွေးသစ်လောင်း လမ်းကြောင်းဆီသို့ ယုံကြည်မှုရှိစွာ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ သို့ရာတွင် ပန်းတိုင်ကို နားလည်သဘောပေါက်ရန်မှာမူ ပန်းခြံအတွင်း လမ်းလျှောက်သကဲ့သို့ လွယ်ကူမည်မဟုတ်ကြောင်း သမ္မတ ရှီက ပြောခဲ့သည်။
ကြံ့ခိုင်၍ ခိုင်မာသော ကြိုးပမ်းမှုမှတစ်ဆင့်သာလျှင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သမိုင်းပေးတာဝန်၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ထိုက်တန်သောအချိန်ကာလနှင့် ပြည်သူများ၏ မျှော်လင့်ချက်တွေ ဖြစ်မြောက်လာအောင် ဖြည့်စွမ်းပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ရှီက ဆိုသည်။
ထို့ပြင် ဟောင်ကောင်နှင့် မကာအိုတို့၏ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုသည် အမိမြေ၏ နှလုံးသားဝယ် အစဉ်အမြဲ နီးကပ်လျက်ရှိကြောင်းနှင့် အမိမြေနှင့် ပြီးပြည့်စုံသော ပြန်လည်ပေါင်းစည်းမှာ ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြား နှစ်ဘက်ဒေသလုံးရှိ ပြည်သူများမှ မျှဝေထားသော ပြင်းပြသောဆန္ဒဖြစ်ကြောင်း သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်က ပြောကြားခဲ့သည်။
“တရုတ်နိုင်ငံတော်ကြီး၏ သား၊ သမီးများအားလုံးအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးအတွက် ပိုမိုတောက်ပသောအနာဂတ်တစ်ခု ဖန်တီးဖို့ အင်အားတွေမှာ ချိတ်ဆက်သွားမယ်လို့ ရိုးသားစွာ မျှော်လင့်ပါတယ်”ဟု ရှီက ဆိုသည်။
၂၀၂၂ ဆောင်းရာသီအားကစားပွဲများအတွက် အသင့်ရှိနေ
တရုတ်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာကြီးအတွက် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေး ၂ ဘီလီယံ ပံ့ပိုးပေးရေး ကတိအား ဖြည့်စွမ်းပြီးဖြစ်ကြောင်း ရှီက မိန့်ခွန်း၌ အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုအချိန်အထိ တရုတ်နိုင်ငံသည် နိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၁၂၀ ကျော်ထံ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေး ၂ ဘီလီယံ ကူညီပံ့ပိုးထားကြောင်းနှင့် ပြည်ပခေါင်းဆောင်များနှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ၏ အကြီးအကဲများထံမှ ချီးကျူးဂုဏ်ပြုမှုများလည်း ရရှိထားကြောင်း ရှီက ဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် ယခုအခါ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများအားလုံးအကြား ပြည်သူသို့ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေး အကြီးမားဆုံးပံ့ပိုးပေးသည့်နိုင်ငံ ဖြစ်လာခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းထံ နှာခေါင်းစည်း ၃၇၂ ဘီလီယံခန့်၊ ရောဂါကာကွယ်ရေးဝတ်စုံ ၄.၂ ဘီလီယံကျော်နှင့် ရောဂါစမ်းသပ်ကိရိယာ ၈.၄ ဘီလီယံကျော် ပံ့ပိုးခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအရ သိရသည်။
မကြာမီ ကျင်းပမည့် ပေကျင်း အိုလံပစ်နှင့် မသန်စွမ်း အားကစားပွဲများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆောင်းရာသီ အားကစားပွဲများ၌ ပြည်သူများ အင်အားပြည့်ပါဝင်ခြင်းသည် အိုလံပစ် လှုပ်ရှားမှုအား အထောက်အကူပြုခြင်းလည်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ကမ္ဘာကြီးထံ ကြီးမားသောအားကစားပွဲများ တင်ဆက်ပြသရာတွင် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွင် ပိုလျှံသည်မရှိပါဘူး။ ကမ္ဘာကြီးက တရုတ်နိုင်ငံကို ကြည့်နေသလို တရုတ်နိုင်ငံကလည်း အဆင်သင့်ရှိပါပြီ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်ရာနေရာများအားလုံး အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ ဖြစ်သလို အားကစားပွဲများအတွက် မီးရှူးတိုင်၊ တရားဝင်ဆောင်ပုဒ်နှင့် ဆုတံဆိပ်များကိုလည်း ထုတ်ဖော်ပြသထားပြီးဖြစ်သည်။ အစမ်းလေ့ကျင့်ပွဲများကိုလည်း အောင်မြင်စွာ ကျင်းပခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ကျောက်လိကျန်း ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
ရှီ၏ မိန့်ခွန်းအား အာရုံစိုက်နားထောင်လျက် ပေကျင်းအခြေစိုက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်သော Ma Shuling က ပြည်သူများအား အားကစားအသိကို မြှင့်တင်ပေးလျက်ရှိကြောင်း၊ ၎င်းအနေဖြင့် အမိမြေအတွက် အမှန်ကတယ်ပင် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်စွာ ခံစားခဲ့ရကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
“မကြာမီကျင်းပတော့မည့် ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်က အားကစားသမားများအားလုံးအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော အောင်မြင်မှုနဲ့ ကောင်းမွန်သောရလဒ်များရရှိပါစေကြောင်း ဆန္ဒပြုပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
Xinhua Headlines: Ringing in 2022, Xi praises “unsung heroes” behind China’s march to great rejuvenation
BEIJING, Dec. 31 (Xinhua) — Chinese President Xi Jinping on Friday gaveaheart-warming speech to see off the “exceptionally significant” year of 2021, acknowledgingaseries of landmark events and countless “unsung heroes” behind China’s march toward great rejuvenation.
In the nationally televised and livestreamed speech to ring in 2022, Xi praised anti-virus workers, people who emerged from natural disasters to rebuild their homes and military personnel protecting the country.
The hard work and dedication of the unsung heroes “have all added to the great momentum of China’s march forward in the new era,” Xi said in his office in central Beijing.
The Chinese president also saluted numerous dream-chasers who were keeping up their good work as he spoke. He mentioned three Chinese astronauts on duty in outer space and people posted to diplomatic missions and businesses abroad as well as overseas Chinese students who are bravely holding on.
In his speech, Xi reviewed the landmark events in the past year.
China has realized its first centenary goal — buildingamoderately prosperous society in all respects. Poverty eradication is considered the “bottom-line task” in attaining this milestone development goal.
It was announced earlier in 2021 that China has scoreda“complete victory” in its fight against poverty. Over the past eight years, the final 98.99 million impoverished rural residents living under the current poverty line had all been lifted out of poverty.
Realization ofamoderately prosperous society in all respects and elimination of extreme poverty is what the Communist Party of China (CPC) has delivered to the people, and it is alsoacontribution to the world, Xi said.
“Having worked in the countryside myself, I know precisely what poverty feels like,” he said, adding that those who once lived in poverty no longer have to worry about food or clothing, or access to education, housing and medical insurance thanks to the sustained efforts of the Chinese people from generation to generation.
“The concerns of the people are what I always care about, and the aspirations of the people are what I always strive for,” Xi said.
Shi Jintong, Party chief of Shibadong Village in central China’s Hunan Province, said the eradication of absolute poverty at the village is just one step forward in local people’s pursuit ofahappy life.
The village is where Xi first proposed the “targeted poverty alleviation” idea during his visit in 2013.
Encouraged by the president’s New Year address, Shi said he will work even harder to improve people’s wellbeing.
In 2021, China has also led the world in economic development and COVID-19 prevention and control.
Wang Xun,adoctor in Wuhan, which was once hit hard by the virus, said she is much more optimistic about the future having emerged from the epidemic.
“Nothing could beat us the Chinese,” she said. “By strictly following the Party’s leadership and putting in place coronavirus containment measures, we are sure to overcome all obstacles.”
In his speech, Xi highlighted the CPC’s centenary celebration on July 1, and the Party’s third resolution on historical issues adopted at the sixth plenary session of the 19th CPC Central Committee in November.
The Chinese president said the country is making confident strides on the path toward great rejuvenation, but to realize the goal will be no easy task likeawalk in the park.
“Only through vigorous and determined endeavor can we fulfill our responsibility to history, prove worthy of our times and live up to people’s expectations,” Xi said.
The Chinese president also said the prosperity and stability of Hong Kong and Macao is always close to the heart of the motherland, and the complete reunification of our motherland is an aspiration shared by people on both sides of the Taiwan Strait.
“I sincerely hope that all the sons and daughters of the Chinese nation will join forces to createabrighter future for our nation,” Xi said.
READY FOR 2022 WINTER GAMES
Xi confirmed in his speech that China has fulfilled the promise of providing2billion doses of COVID-19 vaccines for the world.
To date, the country has provided2billion doses of COVID-19 vaccines to more than 120 countries and international organizations, which has won plaudits from foreign leaders and heads of international organizations, Xi said.
According to the Ministry of Foreign Affairs, China is now the biggest provider of outbound COVID-19 vaccines among all countries and has also provided about 372 billion masks, over 4.2 billion protective suits and over 8.4 billion testing kits to the international community.
Mentioning the upcoming Beijing Olympic and Paralympic Winter Games, Xi said that greater public involvement in winter sports also contributes to the Olympic Movement.
“We will spare no effort to presentagreat Games to the world. The world is turning its eyes to China, and China is ready,” he said.
China has made ready all competition venues, and unveiled the torch, official motto and medals for the Games. Test events have also been successfully held, according to Zhao Lijian,aforeign ministry spokesperson.
Listening attentively to Xi’s speech, Ma Shuling,aBeijing community-based volunteer promoting public awareness of the Games, said she felt truly proud of the motherland.
“Wish the upcoming Winter Olympicsacomplete success and good results for all the athletes,” she said. ■
Photo : Chinese President Xi Jinping delivers his 2022 New Year Address on New Year’s eve. (Xinhua/Ju Peng)
ဆူဒန်နိုင်ငံ၏ အသွင်ကူးပြောင်းရေး အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ကောင်စီက လူထုဆန္ဒပြပွဲများအတွင်း အကြမ်းဖက်မှုများအား ရှုတ်ချ